विश्व अर्थतन्त्रमा परिवर्तनको बादल
पात्रो फेरियो । सन् २०१६ ले बिदा लिएको छ । सन् २०१७ प्रारम्भ भयो । गएको वर्ष विश्व अर्थतन्त्रमा केही नवीन प्रवृत्ति देखा परे । विश्व राजनीतिका केही फरक परिघटनाले अर्थतन्त्रमा भूमरी पारेको छ । अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रमको राजनीतिक उदय र बेलायतको युरोपेली सङ्घबाट बर्हिगमन दूरगामी महŒवका र कतिपय अर्थमा चिन्ताजनक विषय बन्दै छन् । लामो अन्तरालपछि देखिएका यस्ता केही नवीन राजनीतिक प्रवृत्तिले अर्थतन्त्रलाई पनि प्रभावित गरिरहेको छ । सन् २०१६ का कतिपय परिघटनाले अर्थतन्त्रको भावी दिन अनौठो दिशानिर्देश गर्नेछ । यस्ता कतिपय नवीन परिवेशबाट नेपाललाई समेत अलग रहन सक्ने छैन । हाम्रो आफ्नै परिवेशले सिर्जना गरेको हलचल त छँदैछ ।
एसियाली विकास बैङ्क (एडिबी) का अनुसार एसियाली आर्थिक वृद्धि गएको वर्ष पनि औसत अर्थात् ५ दशमलव ७ रहेको थियो र यस्तो आर्थिक वृद्धि नयाँ वर्ष २०१७ मा पनि ५ दशमलव ७ नै रहने प्रक्षेपण छ । बाहिरी प्रभावले एसियाको अर्थतन्त्रमा एक वर्ष अघिदेखि नै केही शिथिलता आउन थालेको थियो । सन् २०१५ मा एसियाली आर्थिक वृद्धि ५ दशमलव ९ अर्थात् झण्डै छ प्रतिशत थियो ।
विश्वकै पहिलो अर्थतन्त्र बन्न अगाडि बढिरहेको चीनको अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलताले एसियाली अर्थतन्त्रलाई केही प्रभाव पारेको छ । आगामी दिनमा थप प्रभाव पार्न सक्ने परिघटना विकसित हुँदैछन् । भारतमा सन् २०१६ को अन्त्यतिर आइपुग्दा पाँच सय र एक हजारका नोटमा लगाएको प्रतिबन्धले अर्थतन्त्रमा तत्काललाई प्रतिकूल असर परेको देखिएको छ । आपूर्ति र रोजगारी खुम्चिएको छ । माग पक्ष पनि कमजोर भई आर्थिक वृद्धिदर घट्ने अनुमान अर्थशास्त्रीहरूको छ । विश्व जनसङ्ख्याको एकतिहाइभन्दा बढी हिस्सा लिएका भारत र चीनको आउने परिवर्तन विश्व अर्थतन्त्रका लागि पनि खिल बन्न सक्छ ।
अमेरिका र युरोपेली बजारमा चिनियाँ निर्यात नै चिनियाँ आर्थिक वृद्धिको मूल आधार थियो । केही वर्ष अघिसम्म चीनको आर्थिक वृद्धि दोहोरो अङ्कसम्मको चामत्कारिक थियो । पश्चिमा अर्थतन्त्रमा आएको न्यून आर्थिक वृद्धिले चीन पनि अछूतो रहन सकेन । पश्चिमा अर्थतन्त्रमा आएको मागको कमीले चीन अर्थतन्त्रलाई पारिरहेको प्रभाव अझै सघन हुँदैछ । अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रमको उदय गएको वर्षको उल्लेख्य घटना हो । अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्वाचनको आरम्भिक मत सर्वेक्षण ६५ प्रतिशत हिलारीका पक्षमा थिए तर ट्रम्पको चीनप्रति कटाक्ष बढ््दै जाँदा अमेरिकी मत उहाँप्रति बढ्दै गयो । चिनियाँ सामान अमेरिकामा प्रतिबन्ध नै लगाउने आरम्भिक भाषण केवल चुनावी मात्र थियो भन्नेहरू पनि छन् तर राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भइसकेपछि पनि ट्रम्पका अभिव्यक्तिहरूले निरन्तर तरङ्ग ल्याइरहेको छ । खासगरी चीन र अमेरिकाको आर्थिक र कूटनीतिक सम्बन्ध (चाइमेरिका) को अब कस्तो अवस्था हुने हो भन्ने व्यग्र प्रतीक्षा छ । जनवरी २०, २०१७ मा ह्वाइट हाउसमा नयाँ राष्ट्रपतिको कार्यभार सम्हाल्ने ट्रम्पको तयारीलाई विश्व अर्थतन्त्रले असाध्य गहन तवरले हेरिरहेको छ ।
गएको वर्ष नै बेलायत युरोपेली सङ्घबाट जनमत सङ्ग्रहको झिनो मतसहित बाहिर आयो । चार दशक युरोपेली सङ्घमा रहेको बेलायत बाहिर आउनु सानो घटना होइन । विश्व अर्थराजनीतिमा यसले आयाम परिवर्तन गर्न सक्नेछ । खासगरी बितेको चार दशकमा विश्वले खुला र उदार अर्थतन्त्रमा उत्कर्ष हासिल गरेको थियो । विश्व व्यापार सङ्गठनको उदयसँगै व्यापार र लगानीले राजनीतिकका सीमा नाघेको थिए । विश्वका कतिपय मुलुकले यो उदारताको सबैभन्दा बढी फाइदा लिए । चीन, भारत, मलेसिया, ब्राजिल जस्ता मुलुुकको अर्थतन्त्रले ठूलो फाइदा लिए पनि अहिले सङ्कटका ढिलमा छन् ।
व्यापार उदारीकरण भूमण्डलीकरणको यात्रालाई सहज बनाएको थियो । पुँजी, जनशक्ति, ज्ञान र प्रविधिको तीव्रतर रूपमा विस्तार भएको थियो । यसले कतिपय साना मुलुकको आन्तरिक उत्पादनमा प्रतिकूल प्रभाव पारे पनि समग्रमा विश्वको समृद्धि बढेको थियो । रोजगारी सीमा वारपार फैलिएको थियो । औसत आयमा वृद्धि भएको थियो । उत्पादन व्यापक बढेको थियो । रोजगारी सीमाभित्रमात्र कैद नभई विश्वव्यापी हुँदा कमजोर अर्थतन्त्र भएको मुलुकका नागरिक लाभान्वित भएका थिए । चालीस लाख नेपाली रोजगारीका लागि विश्वभर छरिनु विश्वव्यापीकरणको कारण हो । देशभित्र यसको विश्लेषण विरलै हुने गर्छ ।
अब विश्वव्यापीकरणमा बे्रक लाग्ने खतरा बढेको छ । अनुदार राजनेताको उदय हुने प्रवृत्ति केही वर्ष अघि नै देखिएको हो । भारतमा नरेन्द्र मोदीको व्यापक मतले प्रधानमन्त्रीमा आगमन दुई वर्ष अघि नै भइसकेको थियो । दुई सय वर्षको उपनिवेशवादी दासत्वबाट (१९४७) मुक्तिसँगै भारत दुई राष्ट्रमा विभाजन भयो । स्वतन्त्रतासँगै धर्मका आधारमा हिन्दुस्तानर पाकिस्तान भएको त्यो पीडामा पनि धर्मनिरपेक्ष प्रजातान्त्रिक राष्ट्रको आधार बनेर झण्डै छ दशक शासन गरेको भारतीय राष्ट्रिय काँग्रेसले इतिहासमा सबैभन्दा नराम्रो गरी हार खानुप¥यो । हिन्दु राष्ट्रवादलाई आधार बन्ने भारतीय जनता पार्टीको उदय ट्रम्प र ब्रिक्जिटको पूर्व अभ्यास थियो । अब यो यात्रा कहाँसम्म पुग्ने हो ?
अनुरदारवादको यो यात्रामा सन् २०१६ ले अझ फड्को मारेको पक्कै देखियो । बेलायतको युरोपेली युनियनबाट बर्हिगमन (ब्रिक्जिट) सामान्य परिघटना मात्र थिइन । कुनै बेला (सन् १९८० को दशक) बेलायती प्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्याचरको उदय उदारवादबाट भएको थियो । राज्यभारले थिचिएर कमजोर भइसकेको बेलायती अर्थतन्त्रलाई उदारीकरणबाट गति दिन उहाँ सफल हुनुभएको थियो । उदारवादले पूरै युरोपलाई समाएको थियो । युरोपेली सङ्घ साझा मुद्रा र साझा कार्यक्रममा परिलक्षित थियो तर बेलायतको बर्हिगमनले युरोपी सङ्घभित्र पनि बिस्तारै अनुदारवाद पम्पिन सक्ने खतरा छ । जर्मनीको प्रतिबद्धता र योगदानले अब कति लामो यात्रा हुने हो ? त्यसमा बितेका वर्षमा आएका आप्रवासी समस्यादेखि ग्रीसको नाजुक अर्थतन्त्रसम्मले गहिरो चोट दिइरहेको छ ।
विश्व अर्थतन्त्रका यी हलचलले आर्थिक वृद्धि पनि माथि उकास्न दिइरहेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सन् २०१६ को अर्थतन्त्रको विश्लेषण गर्दै सन् २०१७ मा पनि विश्व आर्थिक वृद्धि ३ दशमलव ६ प्रतिशतमै अडिने आँकलन गरेको छ । सन् २०१६ पनि ३ दशमलव ६ प्रतिशतकै आर्थिक वृद्धि थियो । खासगरी रसिया र ब्राजिलजस्ता अर्थतन्त्र गहिरो आर्थिक मन्दीतिर उन्मुख हुँदैछन् । पेट्रोलिय पदार्थको भाउको आएको कमीले तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको आर्थिक वृद्धिमा नकारात्मक असर परिरहेको छ । ती मुलुकहरूको औद्योगिक उत्पादनमा कमी आएको छ । संसार विश्वव्यापीकरणतिर गएकै कारण रोजगारीमा विश्वव्यापी असर देखिन थालेको छ । खाडीबाट नेपाल, भारत र बङ्गलादेशका लाखौँ मानिस रोजगारीबाट हात धुुनुपर्ने अवस्था अरू व्यापक बन्न सक्छ । गएको वर्ष भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले केही महिनाअघि आफैँ जहाज लगेर बेरोजगार भारतीय श्रमिकहरूको उद्धार गरेको ठूलो घटना हो ।
नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्पले अब कसरी काम थाल्नु हुनेछ ? यहीँबाट विश्व अर्थतन्त्रको नयाँ रेखाङ्कन आरम्भ हुनेछ । ‘अमेरिका पहिलो’ नाराका साथ निर्वाचन आरम्भ हुँदा मेक्सिकोसित सीमामा पर्खाल लगाउने नारा सबैभन्दा लोकप्रिय भएको थियो । आप्रवासी कामदारलाई आफ्नै देश पठाउने नाराले अमेरिका प्रतिघण्टा ज्याला २० डलरसम्म पुग्ने आँकलन कतिपय अर्थशास्त्रीको छ । अहिले ८÷१० डलर प्रतिघण्टा ज्याला नै अमेरिकी अर्थतन्त्रको अड्याउने आधार हो भन्ने मान्यता राख्नेका लागि ट्रम्पको राष्ट्रवादी अर्थशास्त्रका नयाँ सिद्धान्त यतिबेला प्रतीक्षाकै विषय छ । अमेरिकी सरकारी बण्डमा चीनको ठूलो धनराशि (तीन खर्ब दई अर्ब डलर, २०१४) छ र अमेरिकामा चिनियाँ समानको भन्सार लगाउने प्रावधानले विश्व व्यापारका उदार मापदण्डले कतातिरको यात्रा परिलक्षित गर्ने हो त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । खासगरी उदारीकरणको पश्चागमन यात्राले नेपाल बाहिर गएर काम गर्ने नेपालीको खाइजीविका अर्थतन्त्र भड्खालामा पर्न सक्नेछ ।
विकास सहज पार्दै जापानको सार्वजन